Mitsena ny taona 2016 miaraka amin’ny mpandray anjara Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2019 9:22 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Janoary 2016)
Australia: Seranan-tsambon'i Sydney hita avy ety amin'ny Helodranon'i Lavender, Sydney Avaratra – nandritra ny fankalazana ny taombaovao tamin'ny 2015/2016. Saripikan'i Rezwan, nozaraina tao amin'ny flickr, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND
Momba ny fampiasana sary ao anaty lahatsoratra avokoa no hita tao amin'ny torohevitra fandefa isan-kerinandro ho an'ny herinandro voalohany tamin'ny volana Janoary 2016. Ny mba hakana sary avy any amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV sy mba hiarahana manoratra lahatsoratra an-tsary ny fomba nankalazana ny alin'ny Taom-baovao tany amin'ny toerana misy anao no tanjona.
Misaotra betsaka an'i Rezwan, mpandrindra ny tranokalan'ny mpandika teny Lingua Bangla, tamin'ny fandefasana ny sary voalohany!
Nahitana ny afomanga tsara tarehy tany Sydney tamin'ny fitsenana ny Taombaovao. Manazava izy:
Norafetana tao anatin'ny endrin-tanàna an-drenivohitra ravahan-jiro sy ny afomanga tsara tarehy mitaratra ny seranan-tsambo etsy ambany, tsy mbola nisy fankalazana Taombaovao toy ny tao Sydney.
Jereo ny saripikan'i Rezwan maro kokoa raha nitsidika izao tontolo izao tao amin'ny kaontiny Flickr izy .
Ary indro misy saripika hafa avy amin'i Rezwan tamin'ny fankalazana ny Taombaovao tany Sydney ho fanomezana fanampiny, tao amin'ny Instagram tamin'ity indray mitoraka ity :
andiany voalohany tamin'ny fankalazana ny taombaovao
Any amin'ny tontolon'ny GV hafa, nizara ity fomba amam-panao amin'ny Taombaovao avy any Espaina ity tao amin'ny kaonty Instagram-n'ny Global Voices ny toniam-baovao Lauren Finch:
Fomban-tany Espaniôla ny mihinana voaloboka miisa 12 rehefa mipaika amin'ny misasak'alina ny famantaran'andro amin'ny Taombaovao – voaloboka iray isaky ny fanenon'ny segondran'ny famantaran'andro. Mitondra vintana tsara ho anao amin'ny taona hoavy ny fihinanana izany na farafaharatsiny hameno ny paosin'ireo mpamokatra voaloboka ao amin'ny firenena. Raha ny marina dia voalaza fa lasa nanjary nalaza io fomba amam-panao io tany amin'ity tanin-divay ity nandritra ny taonjato maromaro lasa izay, indrindra nandritra ny fijinjana miroborobo ny voaloboka, niaraka tamin'ny mpamboly nanao varo-boba ny tahiriny. Azo natao mihitsy aza ny nihinana voaloboka mbola vaovao na mamoaka voaloboka efa voavaofy amidy anaty boaty. Aleoko misafidy ny vaovao .
Ho an'ny sary mahaliana kokoa sy ny topi-maso avy amin'ny toerana hafa amin'izao tontolo izao, jereo ny kaonty Instagram GV izay ahitana ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa mizara sary avy amin'ny herinandrony niaraka tamin'ny vahoaka.
Farany fa tsy ny kely indrindra, mamaritra ny fomban-drazana Shiliana amin'ny fankalazana ny Taombaovao ilay Shiliana Elizabeth izay ahitana ny fihinanana voaloboka ihany koa.
Manao fankalazana miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana izahay matetika. Miara-misakafo hariva izahay ary avy eo mivonona amin'ny fiarahana manisa ny segondra farany. Misy fomban-drazana maro rehefa tonga ny Taombaovao. Voalohany, tsy maintsy mihinana voaloboka ianao miaraka amin'ny lakolosy tsirairay manondro ny amin'ny 12 alina. Maneho ny faniriana amin'ny taona hoavy ny voaloboka tsirairay. Rehefa avy mifamihina, mihinana tsakitsaky miaraka amin'ny champagne izahay. Tsy maintsy asiana peratra volamena ao anaty vera (mazava ho azy, tsy maintsy mitandrina tsara ianao mba tsy hitelina izany) mba hanehoana ny harena. Avy eo dia mivoaka ny trano avokoa izahay rehetra ary miampita ny arabe miaraka amin'ny valizy (mampihomehy ny mahita ny mpifanolo-bodirindrina rehetra aminao manao izany) mba hangataka fitsangantsanganana. Ary farany, manipy rano eo am-baravarana ianao ary mamafa izany mba hiarovana ny trano amin'ny fialonana.
Ary tao amin'ny Twitter, nizara ny sakafo hariva tamin'ny Taombaovaony izy izay nahitana ny paella matsiro sy divay Shiliana maro!
Paella sy divay Shiliana teo amin'ny latabatra fisakafoanana hariva an'ny namana tany Santiago, Shily. Saripika nozarain'i @elicitizen tao amin'ny Twitter
Ho an'ny taona 2016 mahafinaritra! Araho tsy tapaka ny torohevitra isan-kerinandro !